Injabulo amatekisi ebuyela emizileni eMnambithi | Isolezwe
Injabulo amatekisi ebuyela emizileni eMnambithi
Izindaba / 10 January 2018, 10:06am / NONTUTHUKO NGUBANE
Umgibeli wetekisi uNksz Mbali Zwane, kwesokudla, ezwakalisa ukujabula kwakhe njengoba amatekisi abemisiwe eMnambithi esebuyele emsebenzini
KUKIKIZWE kwasho nehlombe erenki yaseMnambithi izolo kubuya amatekisi abemiswe uMnyango wezokuThutha KwaZulu-Natal.
Abashayeli nabagibeli batshele Isolezwe ukuthi ukuvulwa kwale renki kulethe injabulo nokukhululeka ngoba bebebulawa yindlala futhi beswele ezokuthutha.
UMnuz Sphamandla “Mzukulu” Vilakazi oseneminyaka eyisishiyagalombili eshayela itekisi usishayele ihlombe isinqumo sikaNgqongqoshe walo Mnyango, uMnuz Mxolisi Kaunda, sokubuyisa amatekisi ngoba kade sebefile yindlala behlezi emakhaya.
“Asikholwanga ngesikhathi sitshelwa ngabaphathi bethu ukuthi amatekisi azomiswa. Ngangithi kuyadlalwa. Kube yisikhathi esinzima noKhisimusi ubumnyama ngoba besihlezi emakhaya singaholi. Bese singomahlalela, indlala isibulele nemindeni yethu. Ngijabule kakhulu njengoba namhlanje (izolo) ngibuyele emsebenzini sengizokwazi ukondla umndeni wami,” kusho uVilakazi.
Ngokusho kwakhe, ayisithupha amatekisi omphathi wakhe abepakiwe egcekeni engasebenzi kusukela ngoDisemba 7 ngonyaka odlule.
“Bekungangeni ngisho nesihlanu,” kugcizelela yena.
Usizi lokuvalwa kwamatekisi lunanelwe yimenenja yerenki yamatekisi ahambela isibhedlela somphakathi eMnambithi, uMnuz Sandile “Spuni” Mdlalo.
“Bekunzima kakhulu kubagibeli ngoba abantu bese behamba ngamaveni nezimoto ezincane beya esibhedlela, abanye beswele okokuhamba ngoba amabhasi abenganeli. Bekubuhlungu, abagibeli besele dengwane. Nathi umsebenzi ubungasekho ngoba bekushaya umoya erenki. Sikushayale ihlombe ukubuyiswa kwamatekisi,” kusho uMdlalo.
Abagibeli bebehleka kuvele elomhlathi yinjabulo, njengoba abanye bethi bebengasakwazi ukuya ezibhedlela nasemtholampilo.
UNkk Khanyisile Mvelase waseMachibini uthe okwenze bakikize, yinjabulo yokubuya kwamatekisi nokuthi sebezokwazi ukuhamba ngokukhululeka.
“Sikikiziswa yinjabulo ngoba sibona kubuya amatekisi, besihlukumezekile kakhulu ngoba besingasakwazi ukuhamba ngokukhululeka. Sizizwa sikhululekile manje njengoba ebuyisiwe,” kusho uNkk Mvelase.
UNksz Mbali Zwane waseMhlumayo naye uthe bekunzima nokuphuma endlini ngesikhathi kuvalwe amatekisi. Uthe kumjabulise kakhulu ukubuya kwawo ikakhulukazi njengoba sekuzovulwa izikole.
“Besisadidekile ukuthi abafundi bazobuyela kanjani ezikoleni njengoba sihlukumezekile ngoKhisimusi singakwazi ukuhamba ngokukhululeka,” kusho uNksz Zwane.
Amatekisi abuyisiwe ngasebenza ngaphakathi eMnambithi namaphethelo, ahambela amabanga amade asamisiwe.
Uma ungena kule renki isimo sibukeka sibuyele kwesijwayelekile futhi kuyaphithizela. UKaunda ufikile izolo ezobheka isimo waphinde wayohlola amabhasi amahlanu ashisiwe. Yize amatekisi asehamba abanye abagibeli abakhulume neSolezwe bathe bayathandaza ukuthi kungabibikho usomatekisi ozodutshulwa futhi kuleli dolobha.